Kubika & Kuchenesa
1.Three danho kumwedzi;
2.Recover sludge zvakanyanya, zvinobatsirawo mafuta kumwedzi;
3.The zvikamu kunyorera ne zvinhu zviri kugadzirwa Stainless simbi;
4.8-10t / h vanokwanisa, stepless chinjika motokari;
mhando Bowl diameter（mm） Bowl length/ Bowl diameter Bowl speed
Mumakore achangopfuura, kambani yedu pamwe outstand nemakambani mazhinji vari pamba uye kunze.
Horizontal Centrifuge KUBUDISA Equipment
Horizontal Centrifuge Kuparadzana Machine
Horizontal Centrifuge nesefa
Horizontal Decanter Cent rifuge
China yakava mutengesi mukuru weRuss ...
China yakave mutengesi mukuru wehuku dzeRussia nemombe mukota yekutanga ya2021, sekureva kwenzvimbo yekurima iri pasi peRussia Ministry of Agriculture. Zvinonzi: "Nyama yeRussia pr ...